Shiinaha waxqabadka sare ee batroolka 48V 20Ah lithium ion ee mootada korantada / soo saaraha mootada iyo alaab-qeybiye | LIAO
1. 48V 20Ah LiFePO4 baakidhka batari ee mootada korontada iyo mootada.
2. Awood weyn iyo badbaadada ugu fiican.
Qaabka Lambar ENGY-F4820N
Awoodda magaca 20Ah
Ugu badnaan lacag joogto ah 10A
Cabbir 170mm * 165mm * 320mm
Codsiga Baaskiil koronto, E-mooto
4. Miisaanka fudud: Qiyaastii 1/3 culeys baytariyada aashitada leedhka.
5. Kiisaska macdanta ee gacanta iyo SOC.
Maaddaama loo adeegsado gaadiid rogrogmi kara oo habboon, mootooyinku waxay suuq weyn ku leeyihiin koonfurta Shiinaha iyo qaar ka mid ah dalalka Koonfur-bari Aasiya. In kasta oo mootooyinku dadka u keeneen wax badan oo raaxeysi ah, wasakhda qiiqa mootooyinka ayaa loo tixgeliyaa inay tahay mid ka mid ah ilaha ugu weyn ee wasakheynta hawada ee jawiga magaalooyinka waaweyn iyo kuwa dhexdhexaadka ah ee waddankayga. Waxaa la sheegay in wasakheynta mooto yar ay u dhigantaa tan gaariga Santana. Si loo nadiifiyo deegaanka loona hubiyo cirka iyo cirka buluugga ah ee magaalada, dalkaygu wuxuu ka mamnuucay mootooyin in ka badan 60 magaalo.
Mootada korantada waa nooc ka mid ah gawaarida korontada ku shaqeysa oo adeegsata batteriga si ay u wado mootada. Nidaamka korantada iyo nidaamka koontaroolaku wuxuu ka kooban yahay mootada wadista, koronto siinta iyo aaladda xakamaynta xawaaraha ee mootada. Qalabka kale ee mootada korontada ku shaqeeya waxay asal ahaan la mid yihiin kuwa mashiinka gubashada gudaha.
Isku-darka mootada korontada waxaa ka mid ah: wadista korantada iyo nidaamka xakamaynta, gudbinta xoogga wadista iyo nidaamyada kale ee farsamada, iyo aaladaha shaqada si loo dhammaystiro howlaha la aasaasay. Nidaamka korantada iyo nidaamyada koontaroolka ayaa ah udub-dhexaadka baabuurta korontada ku shaqeeya, sidoo kale iyagana waa farqiga ugu weyn ee ka dhexeeya gawaarida ay wataan matoorada isku gubaya.
Awoodda korantadu waxay siisaa tamar koronto mashiin wadista mootada korantada. Mashiinka korontada ku shaqeeya wuxuu u rogaa tamarta korontada ee korontada tamar farsamo, wuxuuna ku kaxeeyaa giraangiraha iyo aaladaha shaqada qalabka gudbinta ama si toos ah. Maanta, isha ugu ballaadhan ee laga isticmaalo gawaarida korontada waa baytariyada aashitada-acid-ka, laakiin iyadoo la horumarinayo tiknoolajiyada baabuurta korontada ku shaqeysa, baytariyada aashitada leedhka waxaa si tartiib tartiib ah loogu beddelayaa baytariyada lithium sababo la xiriira xooggooda gaarka ah oo hooseeya, xawaaraha lacag-bixinta oo gaabis ah, iyo ka gaaban. nolosha qofka.
Hore: Abs casing light weight 2000 wareegyada 12V 200Ah lithium ion baytariga leh BMS-ka lagu dhex-dhisay
Xiga: PVC sanduuqa meertada dheer nolosha robot koronto 18V 12Ah LiFePO4 baakid batari leh nabadgelyada ugu fiican